'Ọgwụ ọbara mgbalielu na-aka arụ ọrụ n'abalị' - Nchọpụta ọhụrụ - BBC News Ìgbò
'Ọgwụ ọbara mgbalielu na-aka arụ ọrụ n'abalị' - Nchọpụta ọhụrụ
25 Ọktọba 2019
Ndị ma nke ekwe na-akụ ekwuola na ị chọọ ka ọgwụ ọbara mgbalielu gị rụọrọ gị ọrụ ọfụma, ṅụọ ya tupu ị laba ụra abalị.
Dị ka akwụkwọ mgbasaozi European Heart si kwuo, ọ bụ obere ntuziaka nwereike ịzọ ndụ.
Ha kwukwara na nchọpụta ọhụrụ a na-ekwu na ọgwụ a na-aka enye mgbochi maka obi nkoropu nakwa mkpọnwụ ahụ, ma ọ bụrụ na ị ṅụọ ya tupu ị laba ụra n'abalị kama ịṅụ ya n'ụtụtụ.
Ị ma na onye ọbara mgbali elu na-eme n'afọ 30 na 40 nwere ike imecha nwee nsogbu n'ụbụrụ?
Ndị ọkachamara kwuru sị na ọnọdụ ime ahụ anyị maọbụ etu ahụ anyị si eme n'ime awa 24 dị n'ime otu ụbọchị na-emetụta etu anyị si anabata ọgwụ.
Wegharịa ọgwụ ka ya na ahụ gị na-arụkọ
E nwere ihe mgbaama dị ugbua na-egosi na ọgwụ dị iche iche, gụnyere ọgwụ maka obi, nwereike ịrụ ọrụ ọfụma ma ọ bụrụ na ị ṅụọ ya n'otu mgbe n'ụbọchị.
N'ime nchọpụta nke ugbua, e ji ihe ruru mmadụ puku 19 wee nwalee ọgwụ ọbara mgbalielu ahụ.
Na nwale nke e mere ndị si mba Spen:
E kewapụtara ndị e nyochara ụzọ abụọ - otu bụ ndị ṅụrụ ọgwụ n'ụtụtụ ebe ndị ọzọ bụ ndị ṅụrụ ya tupu ha alaba ụra abalị.
Ndị ọkachamara gbadoro anya ihe karịrị afọ ise ịmata ihe ga-eme ndị ahụ ha na-enyocha.
Ndị ṅụrụ ọgwụ ahụ n'abalị budatara ohere isi n'obi nkoropu maọbụ mkpọnwụ ahụ anwụ, budaruo ya ọkara.
Komkom e ji etinye ọgwụ na-enyere ndị mmadụ aka ịma mgbe ha ga-aṅụ ọgwụ na ọgwụ ole ha kwesịrị ịṅụ
Ọbara mgbalielu kwesịrị ịgbada n'abalị, dịka anyị na-arahụ ụra ma na-ezu ike.
Ndị ọkachamara sị na ọ bụrụ na ọ daghị n'abalị, na-arị elu oge ọbụla, mgbe ahụ ka ị nwereike ibanye na nsogbu obi nkoropu nakwa mkpọnwụ ahụ.
Dịka nchọpụta ahụ si kọwaa, ịnwụ ọgwụ gị n'abalị ga-enye aka ibudata nrugharị ọbara gị n'abalị, maka ndị a chọtara ya bụ ọrịa nke Bekee kpọrọ Hypertension n'ahụ ha.
Ile anya n'ara nwaanyị ọ na-agbati ndụ nwoke?
Ịṅụ ọgwụịba na enyochaghị ahụ na-egbu ike ọgwụ - Dọkịta
Ndị nke ṅụrụ ọgwụ ha tupu ha alaba ụra, nrugharị ọbara ha n'abalị nakwa n'ime ụbọchị dị ọkara, ọ gbadakwa ọzọ n'abalị, ebe ndị nke ṅụrụ nke ha n'ụtụtụ adịghị etu ahụ.
Ọkammụta Ramon Hermida nke mahadum Vigo bu nchọpụta a n'isi, sị na ndị dọkịta nwereike itule ya ma gwa ndị ha na-agwọ ọrịa maka ya, n'ihi na o nwere ike ịzọ ndụ ọtụtụ ndị mmadụ.
Atụmatụ e ji agwọ ọbara mgbalielu ugbua enweghi oge e dere na ọ bụ mgbe ahụ ka a ga-eji agwọ ya. Ndị dọkịta na-akacha agwa ọtụtụ ndị mmadụ ṅụọ ọgwụ n'ụtụtụ makana nkwenye na-ekwu na ọ na-akụda nrugharị ọbara n'ụtụtụ.
"Mpụtara nyocha a gosiri na ndị na-aṅụ ọgwụ ọbara mgbalielu tupu ha alaba karịa ịṅụ ya mgbe ha tetara, na-enwe ike ijide nrugharị ọbara ha. Nke ka mkpa bụ na ọ ga-ebudata ohere ha inweta ọrịa obi nakwa nke ọbara nakwa ọnwụ."
O kwuru na ha ka kwesịrị ime nyocha ndị ọzọ si n'ọgbakọ ndị mmadụ si mpaghara ọzọ ịmata ma nchọpụta ha ọ ga-abara onye ọbụla nakwa ọgwụ ọbara mgbalielu dị iche iche.
Gbaara ụdịrị omume a ọsọ makana o nwereike ịmetụta nrugharị ọbara gị:
Ịṅụ oke mmanya na-aba n'anya
Ibu oke ibu
Agbatịghị ahụ etu e kwesịrị
Iri oke nnu
Vanessa Smith, nke si na British Heart Foundation, kwuru sị: "N'agbanyeghị na nchọpụta a kwadoro ihe a chọpụtaburula n'ihe gbasara ọrịa a, a ka kwesịrị imekwu nyocha n'ebe ndị mmadụ si agbụrụ dị iche iche nọ, nakwa ndị na-arụ ọrụ ịgbanwe oge (shift), iji chọpụta ma n'eziokwu n'eziokwu ịnwụ ọgwụ nrugharị ọbara n'abalị ọ na-aka mma maka ahụike obi."
"Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ọbara mgbalielu ugbua, ọ dị mkpa ịjụ dọkịta gị tupu ị gbanwee oge i ji aṅụ ya. Makana e nwereike inwe ihe kpatara dọkịta ji sị gị na-aṅụ ya n'ụtụtụ maọbụ n'abalị."
Etu m si lafere n'aka ndị bịara igbu m - Ọkaiwu Innoson
Ụnụ ga-atakwute ya kọnkịrị n'ụlọmkpọrọ - Davido
Ihe nkiri ga-amasị gị:
Ihe nwaanyi na-arụ ọrụ ma nọdụ n'ọmụgwọ na-agabiga
Leicester City anapụla Chelsea iko FA ma bunye ha iko anya mmiri akwa
Vidio, Ihe jikọrọ mụ na Chioma na ihe masịrị m maka ndị Igbo - Peruzzi
'Anyị anwụchiela ndị ESN gburu onye otu anyị ma nara ya egbe n'Imo' - Ndị Uweojii
Biafra m chọrọ na-ele anya bụ nke mmụọ, ọ bụghị nke ala- Abaribe
Iniobong Umoren: Ọ bụghị eziokwu na Uduak Akpan kwụrụ ụdọ - Ndị Uweojii
Mgbọ egbe merụrụ ndị uweojii ahụ na mwakpo ndị oji egbe mere na Bende
Ndị ọjọọ agaghị etinyenwu ọgbaaghara n'etiti ndị Igbo na ndị Yoruba - George Obiozor
Onye bụ ọgọ nwoke Onyeisiala Buhari a na-achọ achọ maka ebubo nrụrụaka?